အရေးကြီးတယ် မန်ဘာဝင်တိုင်းဖတ်ပါ >
07-06-2019, 02:52 PM (This post was last modified: 07-06-2019, 03:12 PM by Power cracker.)
အပေါ်ကလင့်ကိုကလစ်ပါ။ နောက်ပိုင်းတင်မဲ့ကားတွေမှာ နိုင်ငံခြားဆိုက်က ပိုက်ဆံပေးရတဲ့ကားတွေပါလာတဲ့အတွက် မြန်မာ မန်ဘာတွေပဲ ကြည့်လို့ ရတာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဘရိုတို့ ဒီလင့်က ကလစ်ဖြစ်အောင် ကလစ်ပါ။
ဒီကိုကလစ်လိုက်ရင် အကောင့်ကို activate မလုပ်ရသေးတဲ့သူတွေအတွက် အကောင့်ဆောက်ထားတဲ့မေးလ်ကို စာတစ်စောင်ပို့မယ်။ အဲ့မှာပါတဲ့လင့်ကိုကလစ်ပြီးတော့ အက်တီဗိတ်လုပ်ပါ။ လုပ်ပြီးတဲ့သူတွေကတော့
ဒီလိုမျိုးပေါ်လာမယ်။ ဒါဆိုရင် လုပ်ပြီးသားပါ။
လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။ ဒီညမှာ မလုပ်ဖြစ်သေးသူတွေကို စာပို့မယ်။ နောက် ၂၄ နာရီအတွင်းမှာ မလုပ်ဖြစ်သေးတဲ့အကောင့်တွေကို အကုန်ဖျက်ပစ်ပါမယ်။ နောက်လူတွေကို ရဂျစ်စတာ လုပ်တဲ့အခါမှာ နာမည်တွေက တိုင်လာပတ်ပြီး တူနေတယ်။ ယူပြီးသားဖြစ်နေတယ်။ ဖိုရမ်ကို လာမလည်တာကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ အကောင့်တွေကို ဖျက်ပစ်မယ်။အကောင့်အတုတွေကို ဖျက်ပစ်ပါမယ်။ တကယ့်မန်ဘာအစစ်တွေပဲထားတော့မယ်။ မဟုတ်ရင် နောက်ပိုင်းတိုင်ပတ်တော့မယ်။ မန်ဘာမဟုတ်သူတွေက နည်းနည်းရှုပ်လာတယ်။ တစ်ခြားဆိုက်က ကားတွေက ဈေးကြီးပေးရောင်းနေကြတော့ နိုင်ငံခြားဆိုက်တွေနဲ့ မငြိစေချင်လို့ပါ။
နာမည်အဖြူေ၇ာင်တွေက activate မလုပ်၇သေးတဲ့ဟာတွေ တစ်ချို့ vip တွေလည်း မလုပ်၇သေးတာ၇ှိတယ် လုပ်ခိုင်းတာ ပိုကောင်းတယ်။ နောက်ပိုင်းကားတွေ မှာ စကားပြောနေ၇မယ်။
နာမည်အစိမ်းရောင်သမားတွေက အကောင့် အက်တီဗိတ်လုပ်ပြီးသားပါ
အဖြူရောင်သမားတွေက မလုပ်ရသေးပါ။ ဒါဆိုရင် ဆိုက်မှာ စာပြန်လို့မရပါ. ပို့စ်တင်လို့မရပါ။မြန်မာတွေပဲသီးသန့် ကြည့်လို့ရတဲ့ ရှယ်ကားတွေကို မမြင်ရပါ။
email ဆာဗာကြောင်နေတယ်။ activate လုပ်တဲ့မေးလ်တွေမရောက်လာဘူးဖြစ်နေတယ်။ editလုပ်နေပါတယ်။ဆောရီးပါခင်ဗျာတို့။
email ဆာဗာ အဆင်ပြေသွားပါပြီ။ နာမည်ဖြူနေတဲ့ အက်တီဗိတ်မလုပ်ရသေးတဲ့နောင်တော်တွေ လုပ်ပေးကြပါ ဒီလင့်ကိုကလစ်ပါ.။. မေးလ်ထဲကို စာတစ်စောင်ရောက်လာမယ်။ လင့်ပါမယ်။ ကလစ်လိုက်ပါ။
It appears your account is already activated or does not require email verification.အမည်ကမစိမ်းသေးပါဘူး အက်မင် အက်မင်ပေးတဲ့ link ထဲဝင်တော့လဲအပေါ်က အင်္ဂလိပ်စာတန်းပေါ်နေပါတယ်။ active လဲလုပ်ပြီးသားလို့ပြောနေပါတယ် ကူညီပါအုံးအက်မင်ရေ......
07-11-2019, 03:14 AM (This post was last modified: 07-11-2019, 03:15 AM by Administrator.)
(07-11-2019, 03:13 AM)Xhoby Wrote: It appears your account is already activated or does not require email verification.အမည်ကမစိမ်းသေးပါဘူး အက်မင် အက်မင်ပေးတဲ့ link ထဲဝင်တော့လဲအပေါ်က အင်္ဂလိပ်စာတန်းပေါ်နေပါတယ်။ active လဲလုပ်ပြီးသားလို့ပြောနေပါတယ် ကူညီပါအုံးအက်မင်ရေ......
စိမ်းနေပါပြီ စိမ်းနေတဲ့သူတွေပဲ ဒီမှာ စာဝင်ရေးလို့ရတာပါ။
ပေါ်လာပြီအက်မင် လိုင်းမကောင်းတာနဲ့တူတယ်? စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားရင် ဆောတီးပါခင်ဗျာ